आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरण लागि सहकारी
| 2016-03-29 Published
यही आउँदो चैत्र २० गते भव्यताका साथ मनाउन गइरहेको सहकारी दिवसको अवसरमा निर्माण मिडियाले राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालसँग गरेको कुराकानी-
नेपालमा सहकारीको सुरुवात कहिले देखि भयो र यसको उद्देश्य के हो ?
छरिएर रहेको स्थानीय पुँजीलाई एकत्रित गरी पुँजी निर्माण गर्ने र स्थानीय रुपमा नै लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पनि सर्वप्रथम वि.स.२०१० मा कृषि सहकारीको नामले सहकारीको सुरुवात भयो ।
नेपालमा सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा सहकारीको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा धेरै प्रगति भएको पाइन्छ । तर पनि गर्नुपर्ने कामहरु अझै पनि धेरै छन् । नेपालले यस वर्ष भोगेको महाभूकम्प र नाकाबन्दीको अवस्थामा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो । हालसम्म नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा सहकारी पुगीसकेको छ । यसले स्थानीयस्तरमा वित्तीय कारोबार गर्नमा सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
वर्तमानको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने हालसम्म ५१ लाख शेयर सदस्यले यस क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका छन् भने आगामी वर्षसम्ममा १ करोड शेयर सदस्य पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ढंगले ५८ हजार युवाले रोजगारी पाइरहेका छन् भने ३२ हजार युवाको रोजी रोटीको माध्यम नै सहकारी भएको छ ।
१० लाख युवा अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारीसँग सम्बन्धित छन् । गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३.५ प्रतिशत रह्यो भने आगामी ३ वर्षभित्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्य अनुरुप हामीले काम गरिरहेका छौं ।
नेपालको संविधानमा नै हरेक निकायमा समावेशी प्रणाली अनुरुप जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने सहकारी क्षेत्र कत्तिको समावेशी रहेको छ त ?
नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हिजोका दिनमा बुबा तथा श्रीमान्सँग खर्च माग्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था बोकेका महिला दिदीबैनीले आज उल्टै बुबा तथा श्रीमान्लाई खर्च दिइरहेका छन् ।पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४६ प्रतिशत महिला सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
यसमा पनि महिलाले सञ्चालन गरेका ९१ प्रतिशत सहकारी सफल रहेका छन् । त्यस्तै सीमान्तीकृत भनिएका वनकरिया, राउटे,चेपाङ,थामी , दरै जस्ता वर्गमा समेत सहकारी पुगेको छ । आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको सहकारी क्षेत्रको विशेष उत्सव सहकारी दिवस यो वर्ष कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? यही चैत्र २० गतेको सहकारी दिवस हामी भव्यताका साथ मनाउने तयारीमा जुटेका छौं ।
यो वर्षको सहकारी दिवस ५९ औं सहकारी दिवस हो भने हामीले ७५ जिल्लामा नै सहकारी दिवस मनाउन थालेको आठ वर्ष भयो । नेपालमा आर्थिक विकास गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको अवस्था त हामीलाई भर्खरै भारतले गरेको नाकाबन्दीले नै देखाइदिएको छ ।
त्यसैले हामीले यस वर्ष आर्थिक विकासलाई जोड दिँदै आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारी भन्ने नारा तय गरेका छौं । अवको एक वर्ष ३२ हजार प्रारम्भिक सहकारीले आफ्नो व्यानरमा यही नारा राखेर आफ्ना गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी दिवसकै अवसरलाई जोड दिँदै सप्ताहव्यापी हाजिरीजवाफ,कविता प्रतियोगिता , निबन्ध प्रतियागिता जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् भने चैत्र २० गतेकै दिनमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा देशव्यापी रुपमा सबैले आ–आफ्नो व्यानरमा र्याली निकाल्नेछन् ।
तपाईंले नेपालको ७५ वटै जिल्लामा सहकारी पुगेको छ भन्नुभयो तर विकटका क्षेत्रमा सुरक्षाको चुनौती छ भन्ने गुनासो छ ?यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, केही विकट क्षेत्रका साथीहरुलाई काम गर्न चुनौती छ नै । हामीले सहकारी क्षेत्रमा विमाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकाय तथा नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आइरहेका छौं ।
विमाको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि विकट क्षेत्रमा कार्यररत साथीहरुलाई म जम्मा भएको निक्षेप बैंकसम्म पुर्याउनका लागि समुहमा हिँड्न अनुरोध गर्दछु ।
अन्त्यमा, यस क्षेत्रमा कार्यरत केही सहकारीले सहकारीको उद्देश्य विपरीत पनि कामकारबाही गरिरहेकाले ती सहकारीलाई छिटै नै कानुनको दायरामा ल्याइनेछ । सहकारीको उद्देश्य विपरीत कसैले पनि कामकारबाही गर्न पाउने छैन ।
त्यस्तै सहकारी विकासका लागि नेपाल संघीय राज्यमा गएसँगै ७ वटा प्रदेशमा नै सहकारी तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन जरुरी छ भने ७५ जिल्लामा नै सहकारी डिभिजन कार्यालय बनाउनुपर्छ ।
यसरी सहकारीलाई अघि बढाउन सकेमा पक्कै पनि राज्यले बोकेको आर्थिक विकासको एजेण्डालाई सफल बनाउन सकिन्छ र राज्य सम्वृद्ध बन्छ ।